Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » ALAROBIA manidina: fiaramanidina mpitondra entana lehibe indrindra eto an-tany
FLYING WHALES dia namolavola vahaolana manavao, mora vidy ary sariaka amin'ny tontolo iainana hitaterana entana mavesatra be any amin'ny faritra matevina na lavitra.
Ny orinasa Franco-Quebec FLYING WHALES, izay mamolavola, mamokatra ary miasa ny sambo fitaterana entana lehibe indrindra eto an-tany (ny LCA60T), dia miomana amin'ny fampiroboroboana ny asany any Quebec.
Fandaminana indray ny firafitry ny tompon-trano
Mba hahatratrarana ireo dingana ilaina amin'ny fahazoana ny fahazoan-dàlana hiasa, FLYING WHALES dia manambara fa mandamina ny rafitry ny tompon-trosa izy.
Tamin'ny 9 septambra 2021, AVIC GENERAL, dia nivarotra ny anjarany mitovy amin'ny tombony 24.9% amin'ny FLYING WHALES, tamin'ny alàlan'ny AVIC GENERAL France, amin'ireo tompon-tany frantsay ankehitriny izay natambatry ny vondrona banky frantsay Oddo.
Vokatr'izany, ny tompon'andraikitra frantsay sy tompon-tany frantsay dia manana 75% an'ny FLYING WHALES ary Quebec dia manana 25% amin'ny alàlan'ny Investissement Québec (IQ). Ny sampana Montreal "Les dirigeables FLYING WHALES Québec" dia 50.1% an'ny FLYING WHALES ary 49.9% an'ny IQ.
Québec: Fototra an-trano any Amerika
Ny iraka ataon'ny sampana Montreal dia ny miditra amin'ny sehatry ny fiaramanidina Quebec ary hiara-hiasa amin'ireo mpilalao efa napetraka sy azo itokisana amin'ity sehatra ity hanangana tombony amin'ny paikady LCA60T sasany. Ity fampidirana ity dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiaramanidina Quebec, indrindra amin'ny resaka angovo azo havaozina ao amin'ity vondrona ara-toekarena manan-danja ity.
FLYING WHALES dia hanomana tranokala indostrialy any Quebec ho an'ny tsipika fivorian'ny fiaramanidina LCA60T feno ho an'ny Amerikana. Toerana maromaro no dinihina. Ny tranonkala voafantina dia hamokatra ny LCA60T rehetra natao ho an'ny Amerika. Maneho famatsiam-bola am-polony tapitrisa ary, farany, ny famoronana asa 200 mivantana, kalitao ary karama tsara.